ट्रम्पले देश निकाला गर्ने भनेका ३० लाखमा नेपाली पर्छन् कि पर्दैनन्? « Sajha Page
प्रकाशित मिति: November 30, 2016
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले जेलमा रहेका ३० लाख आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने अन्तर्वार्ता दिएको साता म न्युयोर्क पुगेको थिएँ। अवैधानिक रूपमा अमेरिकामा रहेकालाई अब कस्तो असर पर्ला भन्ने विषयमा अधिवक्ता डिल्ली भट्टसँग कुराकानी गर्न।
युवा अधिवक्ता भट्ट काम गर्ने तर, क्रेडिट कहिल्यै लिन नचाहने इमान्दार पेशाकर्मी हुन। सन २०१४ तिरको पहिलो भेटमै ‘वकिलका डायरीहरूमा इमान भन्ने शब्द हुन्छ कि हुँदैन?’ भन्ने ठाडो प्रश्न सोधेको थिएँ भट्टलाई।
‘तपाईँलाई कुनै दिन जवाफ दिउँला,’ त्यतिबेला यति मात्र भनेका थिए भट्टले। हाम्रो सम्पर्क छुट्यो। यसअघि मेरो यो खरो प्रश्न सुन्ने कुनै वकिलले फर्केर मतिर सम्पर्क गर्न कहिल्यै चाहेनन्।
एक वर्षपछि, २०१५ को अप्रिलमा नेपालमा भुकम्प गएलगत्तै भट्टले एकदिन टेलिफोन गरे। ‘यही मौकामा अवैधानिक रूपमा अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई कानुनी बसोबास दिलाउन अमेरिकन सरकारसँग ‘टिपिएस’ दिलाउने काममा लागेको छु,’ मलाई फोन गर्दाताका नेपालीलाई टिपिएस दिलाउन उनले आधा काम सकाइसकेका थिए। लगभग दुई मिनेटको कुराकानी भयो। डिल्ली भट्ट फेरि हराए।
त्यसको एक महिनापछि सामाजिक सञ्जालमा टिपिएसको गाइँगुइँ सुनिन थाल्यो। नेपाली दूतावासले समेत हतारमा ‘जोन केरीलाई भेटेर नेपाल सरकारले टिपिएस दिन आग्रह ग¥यो।’ भन्ने प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक ग¥यो। टाठाबाठाका नामबाट ‘नेपालीलाई हामीले टिपिएस दिलायौँ,’ भन्ने समाचार आउन थाले। भट्ट कतै सुनिएनन् देखिएनन्।
‘क्रेडिट त तपाईँलाई जान पर्ने हो नि!’ राज्य आफैंले माग्न नहुने टिपिएस जस्तो विषयको क्रेडिट राज्यकै अंग (दूतावास)ले लगेको विषयलाई व्यङ्ग्य गर्दै भट्टलाई सोधेको थिए।
उनको जवाफ थियो –एक दशकभन्दा बढी समयदेखि परिवार भेटन नपाएकाहरु नेपाल जान पाए। स्टाटस गुमाएका विद्यार्थी भाइहरुले काम गर्ने मौका पाए। आइटीमा पोख्त तर, स्टाटस गुमाएका मेरा आफन्त विद्यार्थी अहिले वर्षको ९० हजार डलरको जागिर खान्छन्। टिपिएसका फाइदा यिनै हुन। सुरु कसले ग¥यो बिर्सनुस्। हामीले टिपीएस पायौँ।’
भट्टसँग सम्पर्क पातलिएको थियो।
गएको महिना अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो। इमिग्रान्टहरूले मन नपराएका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भए। नयाँ राष्ट्रपतिले ३० लाख आप्रवासीलाइ निकाल्ने हल्लाले नेपाल पिट्यो।
कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ? ट्रम्पको यो निति कार्यान्वयन गराउन कति समय लाग्छ? नेपालीहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ कि पर्दैन? यसको सफा जवाफ कुनै कानुन व्यावसायीले दिएनन्। सबले ‘ट्रम्प खराब हो’ भन्ने विषयलाई मात्र विचार र समाचार बनाए।
कागजात नभएकालाई त दुःख भयो, कानुनी रुपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरेकाहरूले समेत ‘ट्रम्पले जित्यो, अब त तिमीहरूलाई नि अप्ठ्यारो होला है?’ भन्ने प्रश्नहरुको सामना गर्नुपर्यो नेपालतिरबाट।
फेरि भट्टलाई सम्झेँ।
‘ट्रम्पको कार्यनीति लागु भयो भने कति नेपालीलाई प्रभाव पर्ला? ‘न्युयोर्क आउनुस् न बसेर कुरा गरौँला,’ तीस सेकेण्डमा कुरा सकियो। न्युयोर्कको ४१ स्ट्रिट नजिकै रहेको बगैँचामा भेटनासाथ भट्टलाई सोधेको पहिलो प्रश्न यही थियो।
‘ट्रम्प प्रशासनले देश निकाला गर्ने ३० लाख मध्ये नेपाली पर्छन् कि पर्दैनन्?’
एक निमेषमा भट्टले जवाफ दिए–पर्छन।
‘सन २०१५ मा २३ जना नेपालीहरू डिपोर्ट गरिएका छन्। आप्रवासीका विषयमा उदार रहेको ओबामा प्रशासनले त २३ जना पुर्यायो भने, ट्रम्पले डिपोर्टेशनकै मुद्धा उठाएर निर्वाचन जितेका छन्। नेपाली पर्दैनन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन।’
अवैधानिक रुपमा अमेरिकामा रहेका कति नेपाली जेलमा छन् यसको आधिकारिक जवाफ कसैसँग छैन। तर, सामान्य लडाइँ झगडा र सेकेण्ड डिग्री असल्ट (ज्यान मार्ने धम्की)को आरोपमा केही हजार नेपाली जेलमा रहेको अनुमान गरिन्छ। ‘काजजातविहीन कति नेपाली जेलमा छन् भन्ने कुरा मुख्य हो। पहिलो चरणमा एक वर्षभन्दा माथिको जेल सजाय पाएकाहरुलाई निकाल्ने भनिएको छ’, भट्टले भने।
‘डिपोटेशन फोर्स बनाउने नै हो भने पनि समय लाग्छ। समाचार जतिको छिटो फोर्स बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्भव छैन’, भट्टले भने।
माइग्रेसन पोलेसी रिसर्चले बताएअनुसार अदालतले डिपोटको आदेश गरेका ९ लाखभन्दा बढी अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न अवैधानिक आप्रवासीहरु अहिले पनि अमेरिकामै छन्। भट्ट भन्छन् ‘उनीहरुलाई निकाल्न मात्र अर्को दुई वर्ष लाग्न सक्छ। ३० लाखलाई निकाल्न अर्को पाँच वर्षमा मुस्किल पर्छ।’
लगभग १ करोड ७० लाखभन्दा बढी अवैधानिक आप्रवासी अमेरिकामा रहेको तथ्यांक छ। तर, यो आधिकारिक तथ्यांक होइन। सीमा जोडिएका राज्यहरु क्यालिफोर्निया, एरिजोनो, न्यु मेक्सीको र टेक्सासबाट मात्रै प्रतिवर्ष करिव ६० हजार अवैधानिक आप्रवासी भित्रिन्छन्।
मेक्सिकोबाट भित्रिनेहरुको सख्या सबैभन्दा बढी छ। सन २०१५ मा अमेरिकाबाट निकालिनेहरुको सख्या पनि सबैभन्दा बढी मेक्सिकन थिए। होमल्याण्ड सेक्युरिटीले बताएअनुसार १ लाख ४६ हजार १ सय ३२ लाई मेक्सिको फिर्ता पठाएको थियो। ‘आप्रवासीप्रति अनुदार प्रशासनले यसको सख्या बढाउने पक्का छ।’
सन २००८ मा जारी गरिएको सक्कली परिचय पत्र विधेयकमाथि बसेर हरेक वर्ष लाखौँको सख्यामा अमेरिकामा रहेका आाप्रवासीहरु निकालिन्छन्। सन २०१५ को रिपोर्ट अनुसार २ लाख ३५ हजार ४ सय १३ विदेशी अमेरिकाबाट निकालिएका छन्। ‘त्यसै भित्र २३ जना नेपाली पनि छन्। ट्रम्प प्रशासन कडा भएर निस्कियो भने, नेपालीको सख्या पनि बढने छ,’ भट्टले भने।
देश निकाला ट्रम्पले पहिलो चोटी गर्न लागेको काम होइन। बाराक ओबामाको पालामा सबैभन्दा बढी इमिग्रान्टहरु डिपोट गरिएको तथ्यांक होम ल्याण्ड सेक्युरिटीले देखाउँछ। सन २०१२ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी आप्रवासी डिपोर्ट गरिएको वर्ष हो। होमल्याण्ड सेक्युरिटीको तथ्यांकले भन्छ– सन २०१२ मा ४ लाख ९ हजार ८ सय ४९ लाई अमेरिकाबाट निकालिएको थियो।
आप्रवासीप्रति अनुदार ट्रम्पको उदयपछि अन्य आप्रवासीहरुलाई जस्तै नेपालीहरुलाइ तनाव थपिएको छ। ‘आफ्ना एजेण्डाहरुमा परिवर्तन भइरहने डोनाल्ड ट्रम्प आप्रवासीको विषयमा परिवर्तन भएनन् भने, सख्यात्मक हिसावमा थोरै भएपनि नेपालीलाई यसको प्रत्येक्ष प्रभाव पर्ने छ,’ भट्ट भन्छन्।
ट्रम्पले एर्टोनी जेनेरलमा जेफ जेसनलाई प्रस्ताव गरेका छन्। आप्रवासीका मुद्धाहरुका बारेमा स्टिभ बेननलाई सल्लाहकार राखेका छन्। भट्टको यो भनाइलाई बल थप्ने आधारहरु हुन ट्रम्पले गरेका यी नियुक्तिहरु।